समाचार - N95 र KF94 मास्कको बीचमा के भिन्नता छ?
N95 र KF94 मास्कको बीचमा के भिन्नता छ?
N95 र KF94 मास्क बीचको भिन्नता कारकहरूको लागि मामिला हो जुन प्रायः प्रयोगकर्ताहरूले ख्याल राख्छन्। KF94 "कोरिया फिल्टर" US N95 मास्क रेटिंगमा समान छ।
N95 र KF94 मास्क बीच भिन्नता: बाहिर निस्कियो
तिनीहरू समान देखिन्छन्, र तिनीहरूले part%% बनाम icles%% कण को ​​लगभग समान प्रतिशतको फिल्टर। M मे बाटको यो चार्टले N95 र "प्रथम श्रेणी" कोरियाली मास्क बीचको भिन्नता वर्णन गर्दछ। स्तम्भहरूले यी दुई प्रकारको मास्क हाइलाइट गर्दछ।
मेट्रिकमा जुन धेरै व्यक्तिहरूले खान्छन् (फिल्टरेशन प्रभावकारिता), तिनीहरू लगभग समान छन्। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, मास्क प्रयोगकर्ताहरूले फिल्टरेशनमा १% फरकको बारेमा मतलब गर्दैनन्।
KF94 मानक अमेरिका भन्दा युरोपबाट अधिक उधारो लिन्छ
यद्यपि मापदण्डहरू बीचको भिन्नताका बारे कोरियन मापदण्डहरू अमेरिकी मापदण्डको तुलनामा ईयु मानकसँग बढी मिल्दोजुल्दो छ। उदाहरण को लागी, यूएस प्रमाणिकरण एजेन्सीहरूले नुन कणको प्रयोग गरेर फिल्टरि performance कार्यको परिक्षण गर्दछ, जबकि यूरोपियन र कोरियाली मापदण्डले नुन र प्याराफिन तेल बिरूद्ध परीक्षण गर्दछ।
यस्तै, अमेरिकाले प्रति मिनेट liters 85 लिटरको प्रवाह दरमा फिल्टर प्रक्रियाको परीक्षण गर्दछ, जबकि EU र कोरियाले प्रति मिनट liters liters लिटरको प्रवाह दरको बिरूद्ध परीक्षण गर्दछ। यद्यपि यी भिन्नताहरू थोरै छन्।
मास्क रेटिंग्स बीच अन्य भिन्नताहरू
फिल्टरेशनमा १% फरक बाहेक, अन्य कारकहरूमा केही सानो भिन्नताहरू छन्।
• उदाहरण को लागी, मापदण्डहरु लाई N95 मास्कको सास फेर्न अलि सजिलो हुन आवश्यक पर्दछ ("उच्छ्वास प्रतिरोध")।
• कोरियाली मास्कहरूले "CO2 खाली" को लागि परीक्षण गर्न आवश्यक छ, जसले CO2 मास्क भित्र निर्माण गर्न रोक्दछ। यसको विपरित, N95 मास्कहरूको यस आवश्यकता छैन।
यद्यपि सीओ २ निर्माणको बारेमा चिन्ताहरू ओझेलमा पर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, एक अध्ययन। पत्ता लगाए कि, मध्यम व्यायामको क्रममा पनि, N mas wearing मास्क लगाएका महिलाहरूको रगत अक्सिजनको स्तरमा कुनै फरक थिएन।
The मास्क लेबल प्रमाणित गर्न, कोरियालाई मानव फिट-परीक्षणको आवश्यक पर्दछ, जस्तो म तल गर्दैछु। युएस N certific certific प्रमाणनको लागि फिट परीक्षणको आवश्यक पर्दैन।
जहाँसम्म, यसको मतलब यो होइन कि मानिसहरूले N95 मास्कको साथ फिट टेस्टहरू गर्नु हुँदैन। कार्यस्थल सुरक्षा (ओएसएचए) लाई नियमित गर्ने अमेरिकी एजेन्सीले केन्द्रीकृत उद्योगमा कामदारहरूलाई वर्षमा एक पटक फिट-परीक्षण गर्नु पर्छ। यो केवल हो कि फिट परीक्षणहरू निर्मातालाई N95 लेबल प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दैन।
N95 vs KF94 मास्क: तल लाइन
कारकमा जुन धेरै व्यक्तिहरू ध्यान दिन्छन् (फिल्टरेशन) N95 र KF94 मास्क लगभग समान छन्। जे होस्, त्यहाँ अन्य कारकहरूमा सानो भिन्नताहरू छन्, जस्तै सास फेर्न प्रतिरोध र फिट-परीक्षण।
पूर्ण स्वचालित २ डी N F फोल्डि Mas मास्क बनाउने मेसिन
स्वचालित KF94 फिश प्रकार 3D मास्क बनाउन मेसिन
पोष्ट समय: मार्च-१२-२२१